I-perfick retreat emaphandleni asemaphandleni
Churchstoke, Wales, United Kingdom
Siyakuthanda ukukunika 'perfick' efudumeleyo yokwamkela eCwm Farm. Sime kumda weShropshire / Welsh kwaye siqhuba indawo encinci. Sigcina umhlambi omangalisayo weebhokhwe ze-pygmy, sinekona yezilwanyana zasekhaya kunye namaqanda amatsha kwiinkukhu zethu.
Iflethi ibekwe ngaphezulu kweyethu pub yabucala, iHagu kunye neMlozi, kwaye iindwendwe zamkelekile ukuba zonwabele ipinti okanye iglasi yento ehlaziyayo kwaye zisebenzise ibhokisi yethu yokunyaniseka.
Iflethi yintsha kraca kwaye ifakwe ngokupheleleyo ukuze uthuthuzeleke. Kukho ibhedi ephindwe kabini, indawo enkulu yokuhamba ngeshawa kunye negumbi lokutyela kunye nekhitshi. Ipropathi ikhanya kwaye ikhanya kwaye nangona ibekwe ngaphaya kweyadi ukusuka kwindlu yethu ayijongwanga, ke unobumfihlo obaneleyo.
Ngokwenyani sikwindlela edumileyo ye-Offa's Dyke kangangokuba yindawo entle kakhulu kubantu abathanda ukuhlola. Iidolophu ezintle nezinqabileyo zaseMontgomery ePowys kunye neNqaba yeeBhishophu eShropshire zombini zimalunga neekhilomitha ezi-5 ukusuka kwindawo yethu kwaye zibonelela ngeekhefi kunye nee-pubs. I-Welshpool ekumgama wemizuzu engama-20 ineevenkile ezinkulu kunye nepropathi entle yeNational Trust iPowys Castle. I-Shrewsbury kunye ne-Ludlow zombini iidolophu ezintle zamandulo zihamba ngemizuzu engama-40 kuphela.
Idilesi yethu yiCwm Farm, Churchstoke, Powys. SY15 6TH.
Ikhowudi yethu yeposi inokukuthatha isiqingatha semayile ukuya kuthi ga kwi-Great Argoed. Ke ngoko xa usondela kuthi, jonga iiWorkshops zaseMellington, ezikwicala lasekunene kwicala lasekhohlo. Nje ukuba udlule oku, indlela iya kuba mxinwa kwaye ipropathi elandelayo oza kufika kuyo yibhari egqunywe ngasekunene ebizwa ngokuba yiLarkin Cottage. Esi sisele siphezulu kwindlela yethu yokuqhuba kwaye abazali bam bahlala khona. Jika ngasekunene uze wehle ecaleni kweshedi ngamasango entsimbi ukuya kwipropati kwaye ungenyuki kwindlela yasefama.
Ngamanye amaxesha kwiimephu zikaGoogle indawo iza njengeHomefix- eli lishishini lethu lemibhobho yamanzi kunye nokufudumeza kwaye sisuka ekhaya.
Njengomamkeli wakho, ndiyafumaneka ukuba ndiyafuneka njengoko ndisebenza ekhaya. Kuyakuvuyela ukunceda kwaye uphendule nayiphi na imibuzo onayo ukwenza ukuhlala kwakho kube ngamava angcono kakhulu, kodwa akusayi kukhubeka ukuba ufuna nje ixesha uwedwa!
Ikhowudi yethu yeposi inokukuthatha isiqingatha semayile ukuya kuthi ga kwi-Great Argoed. Ke ngoko xa usondela ku…